I-Electrolytic Copper Foil Factory |I-China Electrolytic Copper Foil Manufacturers, Suppliers
I-ultra-thick low-profile electrolytic copper foil ekhiqizwe yi-CIVEN METAL ayiyona nje into eyenziwa ngokwezifiso ngokulingana nokuqina kwe-copper foil, kodwa futhi ihlanganisa ukuqina okuphansi kanye namandla okuhlukana okuphezulu, futhi indawo embi kakhulu akulula ukuwa impushana.Singaphinde futhi sinikeze isevisi yokusika ngokwezidingo zamakhasimende.
I-VLP ED Copper Foils
Icwecwe lethusi le-electrolytic eliphansi kakhulu elikhiqizwe i-CIVEN METAL linezici zobuhwaqane obuphansi namandla amakhasi aphezulu.I-foil yethusi ekhiqizwa inqubo ye-electrolysis inezinzuzo zokuhlanzeka okuphezulu, ukungcola okuphansi, ubuso obushelelezi, ukuma kwebhodi eliyisicaba, nobubanzi obukhulu.
I-ED Copper Foils ye-FPC
I-Electrolytic copper foil ye-FPC ithuthukiswe ngokukhethekile futhi yenzelwe imboni ye-FPC (FCCL).Le foil yethusi ye-electrolytic ine-ductility engcono, i-roughness ephansi namandla angcono wepebula kunamanye ama-copper foil.
I-ED Copper Foils Yebhethri ye-Li-ion (i-Double-matte)
I-Electrodeposited Copper foil yebhethri ye-lithium enamacala angashadile (okukabili) iyinto esebenzayo ekhiqizwe i-CIVEN METAL ukuthuthukisa ukusebenza kwe-electrode eyi-electrode eyinegethivu yebhethri.I-foil yethusi inokuhlanzeka okuphezulu, futhi ngemva kwenqubo yokuqina, kulula ukuhambisana nempahla ye-electrode engalungile futhi mancane amathuba okuba iwe.
I-RTF ED Copper Foil
Ucwecwe lwe-electrolytic copper foil (RTF) oluhlanekezelwa ukuhlanekezela luyi-foil yethusi eye yaqina yaba ngamadigri ahlukahlukene nhlangothi zombili.Lokhu kuqinisa amandla e-peel ezinhlangothini zombili ze-foil yethusi, okwenza kube lula ukuyisebenzisa njengesendlalelo esimaphakathi sokubopha kwezinye izinto.